﻿﻿	နည်းလမ်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ | Find My Method
သန္ဓေတားနည်းလမ်းတစ်ခုကို အခြားတစ်ခုနှင့် ဘာကခွဲခြားသနည်း။
ဘေးချင်းကပ်ယှဉ်ကြည့်ရန်အတွက် သန္ဓေတားနည်းလမ်း ၆ ခုအထိရွေးပြီး ရလဒ်များကိုကြည့်ရန် အောက်သို့ဆင်းပါ။
STI လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ကာကွယ်ခြင်း : ကိုယ်ဝန်နှင့် STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ
Ease of use: အပြည့်အဝ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သည်
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : မည်သည့်အချိန်အထိကို သင်ဆုံးဖြတ်ရန်
Who can use it?: မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Most common side effects: ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။
STI လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ကာကွယ်ခြင်း : ကိုယ်ဝန်ကိုသာ ကာကွယ်သည်။
ဖျောက်ရန်လွယ်ကူသည်: ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမလိုအပ် ဆေးခန်း သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင် သွားရန်မလို
Ease of use: မှားနိုင်ချေများ၊ သုတ်မထွက်မှီ ဆွဲထုတ်ရမည်။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : ရေရှည်ကာကွယ်မှုမပေးသော်လည်း မည်သည့်နည်းလမ်းမျှမသုံးတာနဲ့ယှဉ်လျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ကိုယ်၀န်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။
Who can use it?: ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်အတွက်
Effectiveness: အသုံးပြုသူအပေါ်မူတည်။ အခြားနည်းလမ်းများမှာပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်။
ဖျောက်ရန်လွယ်ကူသည်: သည် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမလိုအပ် ဆေးခန်း သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင် သွားရန်မလို
Ease of use: မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ရမည်။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : မည်သည့်နည်းလမ်းမျှမသုံးတာထက်စာလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ကိုယ်၀န်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်
Who can use it?: အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်
ဖျောက်ရန်လွယ်ကူသည်: သည် မည်သူမျှမသိနိုင်
Ease of use: လိင်ဆက်ဆံမှုမတိုင်မီ အသုံးပြုရန် အမြဲတမ်းသတိရရမည်။
Effectiveness: ပုံမှန်အသုံးပြုပါက အတန်အသင့်ထိရောက်။ သုတ်ပိုးသတ်ဆေးဝါးအသုံးပြုရန် အကြံပြုခဲ့သည်။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : တာရှည်ခံကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ အရွယ်အစားစားရှိနိုင်၍ တပ်ဆင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးထားသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူလိုအပ်နိုင်သည်၊
Most common side effects: ယားယံနိုင်ချေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
ဖျောက်ရန်လွယ်ကူသည်: သည် သင့်အိတ်ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါမည်
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : တာရှည်ခံကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ အရွယ်အစားစားရှိ၍ တပ်ဆင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးထားသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူလိုအပ်သည်
Ease of use: အဲဒါကိုသုံးပြီး မေ့လိုက်ပါ
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : အမြဲတမ်းအတွက်၊ အရင်အတိုင်းပြန်မရ
Who can use it?: အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ ၎င်းကို အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အတွက် မျိုးဥပြွန်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားများအတွက် vasectomy သုတ်ကြောဖြတ်ခြင်း ဟုသိကြသည်။
Hormones?: ဟော်မုန်းမပါ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုလိုအပ်
Most common side effects: အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ရာတွင် ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ အမျိုသားသားကြောဖြတ်ရာတွင် ခဏတာနာကျင်မှု၊ ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် သွေးချေဥခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အချို့တွင်မူ ကြာရှည်အနဲငယ်နာကျင်မှုရှိသည်။ သားကြောဖြတ်ခြင်းပုံစံနှစ်မျိုးလုံးတွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အာရုံခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
Effectiveness: အလွန်ထိရောက်သော။ ပုံမှန်နည်းလမ်းများက ပို၍သေချာစေသည်
Ease of use: သင်သည် အဓိကတာဝန်ခံဖြစ်သည်၊ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသုံးပါ။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : မဟုတ်ပါ။ သင် ၅ ရက်အတွင်း အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့လျှင် သုံးပါ။
Most common side effects: ပျို့အန်ခြင်း၊ ပုံမမှန်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
Effectiveness: ပုံမှန်အသုံးပြုပါက အတန်အသင့်ထိရောက်။
STI လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ကာကွယ်ခြင်း : ကိုယ်ဝန်နှင့် STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ မှကာကွယ်သည်
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : တာရှည်ခံကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ သင် လိင်ဆက်ဆံတိုင်းသုံးပါ
Most common side effects: ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ လူအချို့တွင် အရေပြားယားယံခြင်း သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်၍တုံ့ပြန်မှုများရှိနိုင်သည်။
STI လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ကာကွယ်ခြင်း : ကူးစက်သောရောဂါ မှကာကွယ်ခြင်း: ကိုယ်ဝန်နှင့် STIs လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ မှကာကွယ်သည်
Ease of use: ခြင်း: လိင်ဆက်ဆံမှုမတိုင်မီ အသုံးပြုရန် အမြဲတမ်းသတိရရမည်။
STI လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ကာကွယ်ခြင်း : မိမိကို ကိုယ်ဝန်မှသာ ကာကွယ်ပေးသည်
Ease of use: အဝိုင်းကွင်းကို တစ်လတစ်ကြိမ် အစားထိုးရမည်။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : တာရှည်ခံကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ၊ ပုံမှန်အသုံးပြုမှသာ ထိရောက်မှုရှိသည်။ ၃ ပတ်လုံးကြာအောင် တစ်နေရာထဲ၌ထားပြီး နောက်တစ်ပါတ် အဝိုင်းကွင်းမပါပဲနေနိုင်သည်။
Most common side effects: ပထမလအနည်းငယ်အတွက် ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သွေးဆင်းခြင်း၊ ထို့နောက် နဲပါးလာပြီး ပုံမှန်သွေးဆင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
Ease of use: အပတ်စဉ် ကပ်ခွာပြားအသစ် အသုံးပြုရမည်။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : တာရှည်ခံကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ၊ ပုံမှန်အသုံးပြုမှသာ ထိရောက်မှုရှိသည်။ ၃ ပတ်ကြာ အပတ်တိုင်း ကပ်ခွာပြားအသစ်တစ်ခုသုံးရပြီးနောက် တပတ်မသုံးပဲ နေနိုင်သည်။
Most common side effects: ပထမလအနည်းငယ်အတွက် ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သွေးဆင်းခြင်း၊ ထို့နောက် နဲပါးလာပြီး ပုံမှန်သွေးဆင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အရေပြားယားယံနိုင်ချေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
Ease of use: ၁၊၂ သို့မဟုတ် ၃ လတိုင်း တစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရမည်။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : မှု။ ၁၊ ၂ သို့မဟုတ် ၃ လကြာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု (ရရှိနိုင်သည့်အမျိုးအစားများပေါ် မူတည်၍) ။
Most common side effects: များသောအားဖြင့် ရာသီလာလျှင် နဲပါးပြီးတိုတောင်းသည် သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေ လျော့နည်းတတ်သည်။ သွေးစက်ကျခြင်း နှင့် မမျှော်လင့်ဘဲသွေးဆင်းနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။ ၎င်းသည် အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
Ease of use: ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု - နေ့စဉ်ဆေးသောက်ရမည်။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : ကာကွယ်မှုမဟုတ်ပါ၊ နေ့စဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုမှသာ ထိရောက်မှုရှိသည်။
Most common side effects: မမျှော်လင့်ပဲ သွေးနဲနဲဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် သွေးစက်ကျခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊ အချို့အမျိုးသမီးများတွင် စလျှင်စခြင်း ခေါင်းအနဲငယ်ကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစာအိမ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းတို့ ရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
ဖျောက်ရန်လွယ်ကူသည်: တမင်ရှာကြည့်သူမှလွဲ၍ သိပ်မမြင်နိုင်ပါ
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : ၃ နှစ် မှ ၅ နှစ်
Most common side effects: မမျှော်လင့်ပဲ သွေးနဲနဲဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် သွေးစက်ကျခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် လစဉ်ရာသီလာခြင်း ရပ်တန့်နိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
Ease of use: ခြင်း: အဲဒါကိုသုံးပြီး မေ့လိုက်ပါ
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : ၁၂ နှစ်။ ၎င်းသည်အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးအဖြစ်လည်း အလုပ်ဖြစ်သည်။
Most common side effects: ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း နာကျင်မှုအချို့။ ထည့်သွင်းပြီးနောက် ရာသီများများလာခြင်းကို ခံစားရနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
တာရှည်ခံ ကာကွယ်မှု : ၃ နှစ် မှ ၇ နှစ်
Most common side effects: - ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း နာကျင်မှုအချို့။ သွင်းပြီးနောက် သင်တွေ့ရနိုင်သည်မှာ - သွေးစက်ကျဆင်းခြင်း၊ အောင့်ခြင်း၊ ရာသီလာနဲခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝမလာြခင်း ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။